Waxa ay u qabato jaaliyada Soomaliyeed ee liibiya Dadka soomalida ah ee dalkaasi (wareysi Dhanacyo Badan)
Tan iyo markii ay magaalada muqdisho ay dagaalada ka qarxeen horaantii sanadkii tagay waxaa jiray somali fara badan oo ku soo qulqulayay gudaha dalka liibiya kuwaas oo nafsadooda kala soo cararay goobaha dagaaladu ay halakeeyeen ee koonfurta soomaliya,
Hadaba dalka libiya waxaa ka jira jaaliyad soomaliyeed taasi oo wax weyn ka qabata baahida dadka soomaliyeed ee sida xad dhaafka ah ugu soo qulqulaya dalka liibiya. laakiin suaasha is weydiinta mudani waxay tahay maxay qabataa jaalida soomalida ee dalka liibiya.
jawaabta suaashaasi waxaan dhowaan wareysi kala yeelanay guddoomiyaha jaaliyada soomaliada ee dalka liibiya
Md:-Maxamed cali cabdi asagoo arrimahaasi sharaxaad ka bixinayana waxa uu yiri,
Jaaliyada soomaaliyeed ee dalka liibiya waxay gacan weyn ka geysatay sidii ay xabsiyada uga soo saari laheyd dadka soomaalida ee ku xiran xabsiyo kala duwan ee dalkaasi liibiya iyoadoo arrintaasi gacan kaga helaysa dowlada liibiya.
waxa kale oo ay jaaliyada soomalida ay ku howlan tahay sidii ay cafis ugu weydiin lahayd dowlada liibiya maxaabiista soomaliyeed ee ku jira xabsiyadeeda.taasina waxaa daliil u ah sida uu sheegay guddoomiyuhu in ay dhowaan ay soo sii daayeen dad soomaaliyeed oo ayagoo bilaa sharci ah la soo qabtay.
dhinaca kale guddoomiyuhu waxa uu sheegay in jaaliyadu ay shaqo u abuurto dhalinyarada soomaliyeed ee ka soo cararay dagaalada halakeeyay dalka soomaliya guud ahaanba,isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu sheegay in jaaliyada soomalidu ay sameyso sharciyo yaryar oo dadka soomalidu ay ku tix galiyaan heyada amaanka ee dalka liibiya.
intaa kadib guddoomiyuhu waxa uu ugu baaqay dhinacyada isku haysta siyaasada soomaliya in ay u turaan shacabka dhibaatada ku soo jiray mudada 18 sano ah waxa uuna ugu baaqay shacabka soomaliyeed in ay taageeraan dib u heshiisiinta dadaalada nabadeed iyo wax walba oo shacabka u horseedi kara daganaan iyo nabad waarta.
gabagabadii hadalkiisa waxa uu guddoomiyaha uu mahadnaq u soo jeediyay hogaamiyaha dalka liibiya iyo shacabkiisa kuwaas oo u muujiyay dadka soomaliyeed walaaltinimo taasi oo suura galisay in dadka soomaliyeed ay sharci la'aan dalkooda ku joogaan.